Alakamisy 13 Janoary 2022
Ny Fialamboly Amin'ity asa-kanto tsy manam-paharoa ity, nampiasa ny gazety Estonianina i Olga Raag nanomboka tamin'ny taona nanamboarana ilay fiara tamin'ny taona 1973. Ny sary mavo ao amin'ny Tranombokim-pirenena dia nalaina sary, nodiovina, namboarina ary novaina mba hampiasaina amin'ilay tetikasa. Ny vokam-pifidianana farany dia natao pirinty tamin'ny fitaovana manokana ampiasaina amin'ny fiara, izay maharitra 12 taona, ary naharitra 24 ora ny fampiharana azy. Free Estonian dia fiara iray manintona ny saina, manodidina ny olona manana angovo miabo sy tsy misy dikany, fihetsem-po amin'ny fahazazana. Manasa ny hahafanta-javatra sy ny fiaraha-miasa avy amin'ny rehetra.
Speaker Orchestra Vondronà mpandahateny mpandihy izay miara-milalao toa ny mpitendry zavamaneno tena izy. Sestetto dia rafi-peo maro fantsona handefasana feon-java-maneno tsirairay amin'ny fanamafisam-peo samihafa amin'ny teknolojia sy fitaovana samihafa natokana ho an'ny fantsom-peo manokana, eo anelanelan'ny simenitra vita amin'ny feon-kazo sy trompetra vita amin'ny keramika. Ny fampifangaroana ny làlana sy ny ampahany dia miverina ho ara-batana amin'ny toerana fihainoana, toy ny amin'ny kaonseritra tena izy. Sestetto no orkesitra fitambaran'ny mozika voarakitra. Sestetto dia novokarin'ny mpamorona azy Stefano Ivan Scarascia sy Francesco Shyam Zonca.
Seza Zaridaina Ivelany
Seza Zaridaina Ivelany Para dia andiana seza ivelany ho an'ny daholobe namboarina mba hanomezana fahafaha-mivezivezy voafehy amin'ny toerana ivelany. Seza misy seza manana endrika symmetrika miavaka ary mivaona tanteraka amin'ny fandanjana sary an-tsary ny famolavolana seza mahazatra nentanin'ny aingam-panahy tamin'ny endrika tsotra, ity karazana seza ivelany ity dia sahisahy, maoderina ary mankasitraka ny fifandraisana. Samy manana ambany mavesatra mavesatra, Para A dia manohana fihodinana 360 manodidina ny fotony, ary ny Para B kosa dia manohana ny fiviliana roa tonta.
Asabotsy 8 Janoary 2022
Latabatra Ny Grid dia latabatra namboarina avy amin'ny rafitra grid izay nitaona aingam-panahy tamin'ny maritrano nentin-drazana sinoa, izay misy karazana rafitra hazo antsoina hoe Dougong (Dou Gong) ampiasaina amin'ny faritra maro amin'ny tranobe. Amin'ny alàlan'ny fampiasana firafitry ny hazo nentim-paharazana mifangaro, ny fivorian'ny latabatra dia dingan'ny fianarana momba ilay firafitra sy miaina tantara koa. Ny firafitra manohana (Dou Gong) dia vita amin'ny singa maoderina izay azo alaina mora foana rehefa mila fitahirizana.
Lavazza Idola Ny Milina Kafe Alarobia 6 Jolay
Lavazza Desea Ny Milina Kafe Talata 5 Jolay
Quaint and Quirky Ny Kafe Anatiny Dia Endrika Alatsinainy 4 Jolay
Ny Fialamboly Ny Vodin-Kazo Equestrian Speaker Orchestra Cafe Seza Zaridaina Ivelany Latabatra